Kulan looga hadlayay arimo dan u ah Gedo oo ku soo gaba gaboobay Doolow – SBC
Kulan looga hadlayay arimo dan u ah Gedo oo ku soo gaba gaboobay Doolow
Posted by Webmaster on September 27, 2011 Comments
Kulan ku aadan Amaanka gobolka Gedo ayaa waxaa Maanta lagu soo gaba gabeeyay gudaha Degmada Doolow ee gobolkaasi, kaas oo ay wadeen buno ka mid ah DKMG ah oo u badan Xildhibaano ka soo jeeda gobolka Gedo oo ku jira DKMG ah iyo weliba saraakiisha DKMG ah ee gobolka Intiisa badan ku sugan.
Ajandayaal badan oo lagu soo qaaday kulankaas ayaa waxaa ka mid ahaa Gar gaar la gaarsiiyo dadka ku tabaaleysan gobolkaas, Amaanka gobolka, iyo weliba Taageero ay siiyaan dadweynaha iyo waxgaradka gobolka Ciidamada DKMG ah.
Saraakiishii kulankaasi goobjooga ka ahaa waxaa ka mid ahaa kuwo ka socday dowlada Dalka Itoobiya kuwaas oo kulanka kaga qeybgalay kaalintooda ku aadan taageero ay ciidamada Dowlada KMG ah ee Gobolka siiso, iyagoona halkaasi ka sheegay waa saraakiisha Itoobiyaanka ahe in ay diyaar la yihiin wax alaale wixii ay ku taageerayaan dowlada KMG ah.
Dhamaan Dhinacyadii kulankaasi wada qaatay ayaa ay sheegeen in ay isku afgarteen dhamaan waxyaabihii laga wada hadlay, diyaarna loo noqon doono sidii loo hirgelin lahaa waxa ka soo baxay kulanka.
Kulankan ayaa maalmihii lasoo dhaafay si dar darleh uga soconayay deegaanka Degmada Doolow kaas oo siweyn looga dareemay gudaha degmada iyo weliba goobaha uu ka soconayay .